मोदीले केपी ओलीलाई यस्तो भनेपछि सबै परे छक्क ! – भिडियो हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > मोदीले केपी ओलीलाई यस्तो भनेपछि सबै परे छक्क ! – भिडियो हेर्नुहोस
भारत भ्रमण गैर आएकै भोली पल्टै भारतबाट आयो यस्तो समाचार ! ओलीलाई देखेर भारतका नेता डरले थर थर कामे ! केपी ओली राजा महेन्द्र भन्दा शक्तिशाली हुनुहुदो रहेछ भने ! हेर्नुहोस कसले के भन्यो ओलीलाई
फेरि चितवनमा १९ बर्षिया बिद्या पाण्डेले फेसबुक लाइभमै गरिन् देहत्याग!
डडेल्धुरा बस दुर्घटनामा यात्रुहरुको यस्तो बिजोग अवस्थामा मृत्यु (तस्विर)